Sheeg Buugaaga Kate Instant Potant ee Kushiinka ah - Rebates Fitness
Home » Freebies » Sheeg buuga Kukunka ee Keto Instant Your Buug-yaraha Kushiinka
Waqti xaddidan oo keliya, kooxda Keto Resource waxay soo bandhigayaan buuggooda cuntada ee cusub ee BILAASH! Waxa kaliya oo ay tahay inaad bixiso waa lacag yar oo ah rarida iyo haynta.
Buug-yaraha Keto Instant Pot Cook-ka Buugga ah ee bilaashka ah wuxuu ka kooban yahay 50 si sahlan oo loogu diyaariyo cuntada keto gubashada dufanka badan ee aad ku diyaarin karto Dheriga Dhakhso ah (loo yaqaan makiinadda cuntada karisa)
Buug-gacmeedka Keto Instant Pot Cook, waxaad heli doontaa
Tilmaamaha ku saabsan sida wax loogu karsado dheriga degdega ah
10 Cuntooyinka quraacda ee Keto, oo ay ku jiraan Spinach iyo Feta Frittata, Nut iyo Zucchini rootida, iyo Ham iyo Cheese Broccoli Brunch Bowl
10 Cuntada hilibka lagu daro oo ay ku jiraan hilibka lo'da, hilibka lo'da, steak & salsa, iyo waxyaabo kaloo badan
10 Cunnooyinka kalluunka iyo cuntada badda laga helo oo ay ka mid yihiin kuwa sida kuwa loo jecel yahay sida kalluunka loo yaqaan 'salad lime dabiiciga ah iyo toonta' sigaar cabbista 'paprika shrimp!
9 Cuntooyinka cuntada lagu kariyo ee sida weyn ugu fiican in loo isticmaalo cunno fudud ama hilib cunno
11 Cuntada maraq ee cuntada loo kariyo oo ay kujirto khudradda digaagga, maraqa hilib doofaar hilib doofaar, iyo waxyaabo intaa ka sii badan!
Fadlan Fiiro Gaar ah: Deeqdani waxay shaqeyneysaa inta sahaydu socoto. Hoos guji si aad u qabsato nuqulkaaga hadda inta saadku kuugu dambeeyo. Waad la yaabi doontaa sida cuntooyinkan dheriga ah ee loo yaqaan 'keto dheriga dusheeda' ay kaa caawin doonaan inaad gubtid dufanka, caafimaadkaaga hagaajiso, iyo inaad kordhiso heerarkaaga tamarta!
>> Halkan Riix Halkan Si Aad U Hesho Buug-yarahan bilaashka ah <<
Buug-yarahan cuntada ee kooxda Keto Resource ayaa loo bixiyaa si lacag la'aan ah si ay kaaga caawiso in lagu baro bulshada Keto.
Weli ma haysa dheriga degdegga ah? Halkan waxaa ah qaar ka mid ah makiinadaha kariska cadaadiska sare & makiinadaha kariyeyaasha gaagaaban ee laga heli karo Amazon
Siidaynta Affilaite: Qaar ka mid ah xiriirada websaydhadeena waa xiriirro xiriir la leh. Tan macnaheedu waa haddii aad gujiso xiriirinta oo aad iibsato shayga, waxaa suuragal ah inaan helno guddi xiriir la leh oo aan kharash dheeraad ah adiga kuugu fadhiyin. Dhammaan fikradaha ayaa iska leh annaguna waxaan ku talinaynaa oo keliya alaabada iyo / ama adeegyada aan aaminsanahay inay qiimo u yeelan doonaan akhristayaashayada.